८.६१% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि नेपाल कम्युनिटीको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ८.६१% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि नेपाल कम्युनिटीको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ८.६१% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि यस बैंंकको सेयर भाउ प्रतिकित्ता १३५.३५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार नेपाल कम्युनिटीको सेयर कारोबार यही मूल्यलाई आधार मानेर खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य भने १८१.६७ रुपैयाँ छ ।
बैंकले जेठ १८ गते हुने वार्षिक साधारण सभामा ८.६१% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । यसका लागि शुक्रबार (वैशाख २८ गते) देखि सभा हुने दिनसम्म बुक क्लोज गरिएको छ । साधारण सभा दरबार लन प्रा.लि. रुपन्देहीमा विहान ९ बजे सुरु हुनेछ । बोनसपछि पुँजी ५२ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Monday, May 14, 2018